Inkonzo OEM - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Ngaphezulu kweminyaka engama-25 yamava emveliso kubathengi beplanga ye-OEM.
Ukusukela ngoko, iqela lethu lenjongo yeplanga ye-OEM kumazwe angaphezu kwama-50 kumazwekazi amahlanu.
Ii-odolo ze-OEM / i-ODM zamkelekile. Sinenzuzo enkulu kwi-R & D, isiko elenziwe ngeemveliso zebhodi yeenkuni ngokukodwa kwi-plywood kunye nebhodi ye-melamine.
Ngeminyaka emininzi yamava ekusebenzeni nabathengi bethu abavela kwihlabathi liphela, sijongwa njengeqabane elithembekileyo lesicwangciso ngenxa yenqanaba lamava kunye nobungcali obufumanekayo kuphuhliso, uyilo kunye nenkxaso yorhwebo kwiimveliso zabo.
Ukuqinisekisa iimveliso zepaneli ye-ROC OEM yemithi inokuhlala ibamba imeko yefashoni kwaye ihamba phambili kwabanye abakhuphisana nayo. Saseka iZiko le-R & D elinenjineli ezijikeleze i-12 kwaye ziyila ipaneli yeenkuni, ekulungele ukubonelela ngenkonzo engcono kubathengi bethu kunye nokukhuthaza ukhuphiswano lwethu. Sizimisele ukunceda abathengi bethu ukuba baphucule umfanekiso weshishini labo, ukuphucula ixabiso lebrendi, kunye nokwenza mfutshane uphuhliso lwe-LT, ukunciphisa iindleko zokuvelisa. Sinokubonelela ngenkonzo yokumisa enye ye-OEM / ODM. Kule minyaka mi-5 idlulileyo, iqela elikhulu lenze impumelelo enkulu. Amatyala amaninzi amkelwe ngabathengi kwaye abanceda ukuba babambe isabelo sentengiso ngakumbi.
Sinezinto zethu kumzi-mveliso weplywood / kumzi-mveliso we-OSB / kumzi-mveliso we-MDF nakwimveliso yemveliso ye-LVL, iFektri yezixhobo ukuhlangabezana nemveliso efunekayo ye-OEM yoMthengi. Iziphumo zenyanga ukuya kuthi ga kwi-70000CBM (I-PLYWOOD, i-OSB kunye ne-MDF njl.
Sinenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho wangaphakathi kuhlolo olungenayo lwempahla eluhlaza, ukuhlolwa kwemveliso kunye nokuhlolwa kwangaphambili kokuthunyelwa. Oku kukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu ziyahlangabezana neemfuno zabathengi ezifunekayo kwaye iimveliso zakho ze-OEM zithembekile kumgangatho. Umzi mveliso wethu uphumelele i-ISO9001 kwaye iimveliso zethu zafumana i-CE, FSC, JAS-ANZ, PEFC, BS njl izatifikethi. Sikholelwa kuphela ngomgangatho olungileyo emva koko unokufumana ukuthembela kubathengi bethu.
Ngeminyaka yamava okuthumela kwelinye ilizwe, sinokuphatha inkqubo yokubhengezwa kwamasiko ngokutyibilikayo nangexesha elifanelekileyo ukulungiselela uthutho lwasekhaya ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwexesha lokuthunyelwa kwabathengi bethu. Sonke sikholelwa ukuba eyona nkonzo ibalulekileyo yeyona nto ingenisa elizweni ukuphumelela ukuthembela kubathengi bethu kule mihla.
Qala ishishini lakho elitsha ngeplywood esemgangathweni, i-OSB kunye ne-MDF. Masenze iimveliso zakho ze-OEM / i-ODM kwaye sikhuthaze ishishini lakho. Nceda unxibelelane neROCPLEX ngoku.
Inkqubo ye-OEM / ODM
Yintoni inkqubo ye-ROCPLEX yeplanga ye-OEM / ODM?
R & D ulwenziwo
1. Uhlalutyo lweemfuno
Njengenyathelo lokuqala lophuhliso, iqela lethu lemveliso likulungele ukubandakanyeka kuhlalutyo lweemfuno. Abanye abathengi abanombono ongaqondakaliyo, njengepaneli yeenkuni esetyenziswa kwivenkile okanye esetyenziselwa indawo yokwakha, siya kulungelelanisa iqela lethu lobunjineli, iqela lentengiso ukuze babonelele ngengcebiso yabo yobuchwephesha ukuqinisekisa ukuba imveliso iyahlangabezana nolindelo lwentengiso.
Kweli nqanaba, senza uluhlu lweempawu ezinqwenelekayo zepaneli yakho yeenkuni.
2. Uphengululo lobuGcisa
Ngoluhlu olunzima lomlinganiswa oyifunayo, iqela lethu lemveliso, kunye nesebe lokuthenga, linxibelelana nabaxhasi bezinto zethu, ukwenza uxwebhu lokumiliselwa kwezinto.
Kweli nqanaba, sinokubuyela kwinqanaba lokuqala ngenxa yokunokwenzeka okanye umba weendleko ezifanelekileyo.
3. Iindleko neShedyuli
Ngokusekwe kuphando lwangaphambili, iROCPLEX inokubonelela ngefom yokuhlawulisa kunye neshedyuli, eyahluka kakhulu kubalinganiswa abanqwenelekayo, ubungakanani kunye nokukwazi ukuhambisa ikhonkco.
Kweli nqanaba, singasayina ikhontrakthi esesikweni.
4. Uphuhliso lweSampula
I-ROCPLEX iya kwenza isampulu, ebizwa ngokuba yisampulu yobunjineli, ethi iqhubekeke bonke abalinganiswa abayilelweyo. Le isampulu ke iphantsi kovavanyo lwebilisi, uvavanyo lokuqina, uvavanyo lwamandla kunye novavanyo lokuqina.
Sikhuthaza abathengi ukuba bazibandakanye kuphuhliso lokubonelela ngengxelo ekhawulezileyo.
5. Umyalelo wovavanyo
Ngesampulu yobunjineli eyonelisekileyo, sinokuqhubela phambili kwinqanaba lokuvavanya. Sivavanya ubungozi obunokubakho kwimveliso enkulu, ukuthembeka komthengisi kunye neshedyuli enkulu yemveliso.
6. Imveliso enkulu
Ngazo zonke iingxaki ezisonjululwe kwaye kufunyenwe umngcipheko, singena kwinqanaba lokugqibela lemveliso enkulu.